चलिरहेको रेलबाट फालिदिँदा आमा छोरीको मृत्यु
एजेन्सी । भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशको मधुरा जिल्लामा लुटेराहरुले आमा छोरीलाई चलिरहेको रेलबाट फालिदिँदा उनीहरुको मृत्यु भएको छ । चलिरहेको रेलमा लुटेराहरुको विरोध गर्दा लुटेराहरुले आमा छोरीलाई रेलबाट फ...
७ वर्षीय बालकको ५२६ वटा दाँत, डाक्टरहरु हैरान !
एजेन्सी । सात वर्षीय बालक बङ्गाराले लगातार दु:ख दिएपछि हस्पिटल पुगे । आफूलाई खानेकुरा चपाउन साथै मुख चलाउनसमेत समस्या भएको बालकले बताए । उक्त बालकको मुखलाई जब डाक्टरहरुले खोले उनीहरुले बङ्गारा आसपा...
केजरीवाल सरकारको घोषणा: २ सय यूनिट विजुली सित्तैमा
एजेन्सी । भारतीय राजधानी दिल्लीको सत्ता समालिरहेका आमआदमी पार्टीका मुख्यमन्त्री केजरीवालले दिल्ली विधानसभा निर्वाचनपूर्व ठूलाे घोषणा गरेका छन । दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालले दिल्लीवासीलाई राहात प...
दश हजार सैनिक थपेपछि काश्मीरी जनता त्रसित
गत साताको अन्त्यमा भारत प्रशासित काश्मीरमा १० हजार भारतीय सैनिक तैनाथ गरिएपछि स्थानीय त्रसित भएका छन् । यद्यपि, भारतीय अधिकारीले सो कदम नियमित तालिका अनुसार भएको जनाएका छन् । भारतले मुसलमान समुदायको...
भाजपा नेताले भेटे प्रधानमन्त्री ओलीलाई
भारतीय जनता पार्टीक ( भाजपा) का प्रभावशाली सांसद डा. सुब्रह्यण्यम स्वामीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेट गरी नेपालको पछिल्लो रानजीतिक अवस्थाका बारे छलफल गरेका छन् । उनीहरुबीच दुई पक्षीय सम्बन्धबारे प...
एजेन्सी । इरानले गत शुक्रबार कब्जामा लिएको बेलायतको स्टेला इम्पेरो नामको बेलायती तेल ट्यांकरको चालक दलका २३ सदस्यमा १८ जना भारतीय नागरिक भएको बताइएको छ । भारतीय विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ता रभीसकुमारले...
नयाँ दिल्ली । भारतले चन्द्रयान प्रक्षेपण गर्ने नयाँ मिति घोषणा गरेको छ । गत साता प्रक्षेपणको पूर्वसन्ध्यामा इन्धन चुहिएका कारण अन्तिम समयमा प्रक्षेपण स्थगित भएको थियो । यससँगै भारतले आगामी सोमबार चन्...
एजेन्सी । भारत उत्तर प्रदेशको आगरास्थित यमुना एक्सप्रेस वे मा बस दुर्घटनामा हुँदा २९ जनाको मृत्यु भएको छ । प्रदेश राजधानी लखनउबाट ३३८ किमी टाढा रहेको एक झरनाको नालामा बस झर्दा १८ जना घाइते भएका छन् ...
एजेन्सी । बाँदरलाई मानव पुर्खा भन्ने गरिन्छ । यतिसम्म कि बाँदर र मान्छेको डीएनए पनि ९८ प्रतिशतसम्म मिल्ने गरेको पाइन्छ । पहिलेपहिले बाँदर जंगलमै रमाउँथे । तर अहिले तीव्र शहरीकरणले बाँदरहरुलाई विस्था...